म त गर्भवति भएछु ! - Everest Dainik - News from Nepal
म त गर्भवति भएछु !
श्रीमती घरमा सुतिरहेकी थिईन् । अनि शेरे अफिसबाट घर आइपुग्यो ।
शेरेलाई देख्ने वित्तिकै श्रीमतीले भनिनः शेरे एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ । भनौं, कुट्दैनौ नी ।
शरेः ल किन कुट्नु । भन न के हो?
श्रीमतीः म त गर्भवति भएको छु ।
याे पनि पढ्नुस चुट्किलाः शेरे केटी हेर्न गएपछी...
शेरेः ओ हो बुढी , यो त खुसीको कुरा हो नी । मैले तिमीलाई यस्तो राम्रो कुरामा पनि कतै पिट्छु होला त?
श्रीमतीः पहिले पनि गर्भवति भएको कुरा बुवालाई सुनाउँदा बुवाले कुट्नु भाको थियो । अनि अहिले पनि डर लाग्यो नी ।
शेरे बेहोस ।
याे पनि पढ्नुस चुट्किलाः गर्लफ्रेन्डलाई शेरेले एकान्तमा छुन खोजेपछि...
ट्याग्स: mood fresh, pregenent